Phezulu CRI Dimmable Ceil Lamp 50W 100W 150W WAKHOKELA Indawo Esembindini Ukukhanya-Antayi-Glare kuba Museum Ukukhanyisa Supermarket Ukukhanyisa FT Uphawu 9657, China Phezulu CRI Dimmable Ceil Lamp 50W 100W 150W WAKHOKELA Indawo Esembindini Ukukhanya-Antayi-Glare kuba Museum Ukukhanyisa Supermarket Ukukhanyisa FT Uphawu 9657 Manufacturers, Abanikezeli, Ifektri - FETON CORPORATION Co.,Ltd
Isiseko sokukhanya kwe-LED
Ividiyo yeZibane ze-LED
Ulawulo lwekhonkco lonikezo
Ixabiso eliphakamileyo le-CRI Dimmable Ceiling Lamp 50W 100W 150W I-LED Scotlight Track Light Light Anti-Glare yeMyuziyam yeZibane zeMarketarkark FT Series 9657
Umbala oMnyama wokuGqibela: Umbala oMnyama okanye oMiselweyo
Izixhobo zomzimba weLambu: IAluminiyam yeAlloyum
Ucingo: 2/3 / 4wire
Ukwamkelwa kocingo lwe-aluminium ye-vaccum ye-angle yomthi ukuqinisekisa uzinzo kunye nesiphumo sokubonisa ukukhanya.
◆ Ukwamkelwa kwesizukulwana esitsha seetshipsi ze-LED ngokuqaqamba okuphezulu kunye nobomi obude, ubushushu obuphantsi kunye nobomi obude beetshipsi zesibane.
◆ Fikelela umgangatho wetraww othe tye oyi-360 ° kunye nomgangatho othe nkqo wama-90 ° wohlengahlengiso olukhululekileyo ukuze uhlangane naluphi na ukhokelo lokukhanya. Isibane siyaguquka ngakumbi kwaye asiphoswa zinkcukacha.
◆ Isicoci sobushushu esenziwe ngokwenzululwazi sineziphumo ezingcono zokupholisa.
Surface Umphezulu womphezulu ophathwe nge-anodization, umqobo we-kutu, ubugcisa bokubonakala.
Bright Ukukhanya okuphezulu, ukusebenza ngokuphezulu, ukonga amandla, ukusetyenziswa kombane osezantsi.
Ubume obuhlangeneyo bokusasaza ubushushu, ukuthoba kwexabiso lokukhanya kunye nobomi obude.
Dec Ukuncipha kokukhanya kuncinci kakhulu (ngaphantsi kwe-1% emva kweeyure zomsebenzi ezingama-2000).
◆ Umgama wokukhanya omde kunye neendawo zokukhanya ngokubanzi.
◆ Akukho kulibaziseka ekuqaleni okanye ukufudumeza ixesha elifunekayo.
* Cofa apha ukuze ufumane iividiyo ezininzi zeMveliso
(1) Iingubo / izihlangu / iboutique / ivenkile yobucwebe
(2) Iivenkile ezinkulu, iiholo zemiboniso, ishishini lokugcina izihambi, iimyuziyam
(3) Enye indawo yokuthengisa kunye nendawo yokuhlala
1. I-FETON ibonelela ngesicwangciso sokumisela ukukhanya okucwangcisiweyo sokumiliselwa kwabakhanyisi abaninzi abaziwayo, abayili bezakhiwo, iinjineli zombane, kunye nabaqulunqi bomhombiso bangaphakathi kusetyenziswa inkqubo yolawulo esemgangathweni, ulawulo oluluqilima lonikezo lwentengiso namaqela eengcali ze-LED.
2. Sinokuziqhelanisa neemveliso ngokweemfuno zabaxumi. Sisoloko sinyanzelisa "ngomgangatho kunye nezinto ezintsha" kwaye sinikezela ngamaxabiso okhuphiswano kubaxhasi bethu.
3. I-CRI ephezulu kunye nokukhanya okuqinisekileyo kokukhanya kuya kuphucula umfanekiso wayo nayiphi na imveliso enqwenele ukuqaqanjiswa, ukubamba umdla wabathengi, kwaye kwandise inzuzo yeshishini.
I-Feton Insight malunga nesisombululo sokuKhanya
Iiworkshop zoLimo lweMveliso ye-Feton ye-Feton
Kumgangatho we-13, kwiSakhiwo seNkokheli seHlabathi, uNombolo 42 Wenming West Rd, Shunde, Guangdong, China
Ubunini belungelo lokushicilela © 2019 FETON CORPORATION Co., Ltd Onke amalungelo agciniwe.